WEPỤ IHE OMUME WINDOWS 10 - ISIOKWU - 2019
06/27/2018 windo | maka mmalite | mmemme
Na ntuziaka a maka ndị mbido, ọ bụ nkọwa zuru ezu ebe ị ga-esi wụnye na iwepu ihe omume Windows 10, otu esi abanye na nke a nke ogwe ntụle na ozi ndị ọzọ gbasara esi ewepụ ihe omume Windows 10 na ngwa sitere na kọmputa gị.
N'ezie, ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere nsụgharị osụm nke Os, na 10-n'ime akụkụ nke iwepụ mmemme, ntakịrị agbanweela (mana agbakwunyere ọhụrụ nke ntinye uninstaller), ọzọkwa, ọzọ, ụzọ dị ngwa pụtara iji mepee ihe "Tinye ma ọ bụ Wepụ Mmemme" ma na-agba ọsọ usoro-ntinye n'ime ihe nhazi. Ma, ihe nke mbụ. I nwekwara ike inwe mmasị na: Otu esi ewepu ngwa ngwa Windows 10.
Ebee ka Windows 10 na-etinye na iwepu mmemme
Ogwe ihe nchịkwa "Tinye ma ọ bụ Wepụ Mmemme" ma ọ bụ, karịa, "Mmemme na Atụmatụ" dị na Windows 10 n'otu ebe dịka ọ dị na mbụ.
Mepee ogwe ntụle (iji mee nke a, ị nwere ike ịmalite ịde "Ogwe njikwa" na nchọta na nchịkọta ọrụ, wee mepee ihe ahụ achọrọ. Ụzọ ndị ọzọ: Otu esi mepee ogwe ntụle Windows 10).
Ọ bụrụ na "Atiya" ahụ debere na "View" ubi dị n'akụkụ aka nri, mgbe ahụ na ngalaba "Mmemme" ahụ mepee "Uninstall program".
Ọ bụrụ na a na-ahọrọ akara ngosi n'ọhịa nlele ahụ, mepee ihe "Mmemme na atụmatụ" ihe iji nweta ndepụta nke mmemme arụnyere na kọmputa ma wepu ha.
Iji wepu ụfọdụ n'ime mmemme ahụ, họrọ ya na listi ma pịa bọtịnụ "Wepu" na nkwụkọta elu.
Nke a ga-ebido denye akwụkwọ site na onye nrụpụta na-eduzi gị site na usoro dị mkpa. Na - emekarị, pịa bọtịnụ ọzọ iji wepụ ihe omume ahụ.
Ihe dị mkpa: na Windows 10, ọchụchọ site na ọrụ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma, ma ọ bụrụ na ị na-amaghị na ebe otu mmemme dị na sistemụ ahụ, malite ịpị aha ya na nchọta ọchụchọ, ị ga-achọta ya.
Iwepụ mmemme site na "Nhọrọ" Windows 10
Na Os ọhụrụ, na mgbakwunye na panel ahụ, iji gbanwee ntọala bụ ngwa ọhụrụ "Ngalaba", nke a pụrụ ịme site na ịpị "Malite" - "Ngalaba". Tinyere ihe ndị ọzọ, ọ na-enye gị ohere wepu mmemme arụnyere na kọmputa gị.
Iji wepu mmemme Windows 10 ma ọ bụ ngwa n'iji ntinye, soro usoro ndị a:
Meghee "Ntọala" ma gaa "Ngwa" - "Ngwa na atụmatụ."
Họrọ site na listi ihe omume ahụ ka ehichapụ wee pịa bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Ọ bụrụ na a na-ehichapụ ngwa ngwa Windows 10, naanị ịkwesịrị ikwenye nhichapụ. Ọ bụrụ na ememme kpochapụla (ngwa ngwa desktọọpụ) ehichapụ, a ga-ewepụ onye nchịkọta ọrụ ya.
Dịka ị pụrụ ịhụ, mbipụta ọhụrụ nke interface maka iwepu ihe omume Windows 10 site na kọmpụta dị nnọọ mfe, dị mfe na ịrụ ọrụ nke ọma.
3 Ụzọ wepu Windows 10 Mmemme - Video
Ụzọ kachasị ngwa imeghe "Mmemme na Atụmatụ"
Ọfọn, ụzọ ọhụrụ e kwere ná nkwa iji meghee usoro iwepụ ihe omume na "Ngwa na Atụmatụ" Windows 10 kwa. E nwere ụzọ abụọ dị otú ahụ, nke mbụ mepee ngalaba na mpaghara, ma nke abụọ ma ọ bụ na-amalite usoro mmemme ngwa ngwa ma ọ bụ mepee akụkụ "Mmemme na Atụmatụ" :
Right click on the "Start" button (ma ọ bụ Nweta X igodo) wee họrọ ihe menu n'elu.
Naanị mepee menu "Malite", pịa nri ọ bụla (ma e wezụga maka ngwa Windows ngwa 10) ma họrọ "Wepụ".
Ọtụtụ mmemme arụnyere na-emepụta onwe ha nchekwa na "Ngwa niile" nke menu Malite, nke, na mgbakwunye na ụzọ mkpirisi ụzọ, enwerekwa ụzọ dị mkpirikpi iji wepụ ihe omume ahụ. Ị nwekwara ike ịhụ faịlụ uninstall.exe (mgbe ụfọdụ aha nwere ike ịdịtụ iche, dịka ọmụmaatụ, uninst.exe, wdg.) Na folda ahụ na ihe omume ahụ, ọ bụ faịlụ a na-amalite iwepụ.
Iji wepụ ngwa site na ụlọ ahịa Windows 10, ịnwere ike pịa ya na ndepụta nke ngwa na Malite menu ma ọ bụ na ya na ihuenyo mbu ya na bọtịnụ òké aka ma họrọ "Hichapụ" ihe.
Na mwepụ nke ụfọdụ mmemme, dị ka antiviruses, enwere ike inwe nsogbu site na iji ngwaọrụ ndị a chọrọ ma jiri ya na-eji ngwa ọrụ mwepụ pụrụ iche site na saịtị (lee otu esi wepụ antivirus na kọmputa). Ọzọkwa, maka nhichapụ zuru oke nke kọmputa n'oge iwepụ, ọtụtụ na-eji ụlọ ọrụ pụrụ iche - ndị na-enweghị nchịkọta, nke a pụrụ ịchọta na ihe omume kachasị mma maka iwepu mmemme.
Ihe ikpeazụ: ọ nwere ike ịpụta na ihe omume ahụ ịchọrọ iwepu na Windows 10 abụghị naanị na ndepụta nke ngwa, ọ bụ na kọmputa. Nke a nwere ike ịpụta ihe ndị a:
Nke a bụ mmemme na-agagharị, nke pụtara. ọ dịghị achọ ntinye na kọmpụta ma na-agba ọsọ n'enweghị usoro nwụnye, ị nwere ike ihichapụ ya dị ka faịlụ mgbe niile.
Nke a bụ usoro obi ọjọọ ma ọ bụ achọghị. Ọ bụrụ na e nwere ụdị ntanye ahụ, zoo aka na ihe kachasị mma iji wepụ malware.
Enwere m olileanya na ihe a ga-aba uru maka ndị ọrụ nyocha. Ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ - jụọ ha n'ime ihe ndị a, m ga-anwa ịza.
Ma na mberede, ọ ga-adọrọ mmasị:
Ịkwụnye ngwa na-egbochi na gam akporo - ihe ịme?
Esi gbanyụọ mmelite Windows 10
Oku oku na gam akporo